Selifikile kuleli ibandla likaSathane - Ilanga News
Home Izindaba Selifikile kuleli ibandla likaSathane
Yibhayibheli elisetshenziswa ngabenkolo yobusathane nophawu oluthathwe enkundleni yabo yokuxhumana.
KWEHLUKENE imibono ngokuvulwa kwebandla lakwasathane eNingizimu Afrika, elibizwa ngokuthi yi-South African Satanic Church. Leli bandla livulwe ngokusemthethweni ngoNhlolanja (February) kulo nyaka eCape Town.
Ngemuva kokuba abaphathi bebandla uRiaan Swiegelaar nozakwabo abambisene naye u-Adri Norton, bephumele obala bathi iminyango ebandleni labo ivuliwe, kusuke ukukhuluma abantu baveza imibono ehlukene.
Imvamisa kwabenkolo yobuKrestu kunenkolelo yokuthi miningi imigilingwane eyesabekayo eyenziwa ngabakhonza usathane. NgoLwesihlanu mhla ka-19 ku-Nhlangulana (June), ILANGA LangeSonto lixhumane noRiaan ngenhloso yokuthola kabanzi ngalokho leli bandla elikholelwa kukho, nenqubo yalo.
Uyalele intatheli ukuba ithumele imibuzo nge-email, nebala yathunyelwa ngalo lolo suku ntambama, ngeshwa kuze kube manje abazange baphendule.
Nokho ngesikhathi uRiaan ekhuluma emsakazweni iCape Talk, nomsakazi uLester Kiewit, ohlelweni olubizwa ngokuthi ‘Tonight with Lester’ mayelana nesithombe esibi ubusathane obunaso emphakathini, uthe kunomahluko phakathi kwabakhonzi baka-devil nabakhonzi bakasathane.
Ngokusho kwakhe, abakhonzi baka-devil bahlanekezela ubuKrestu kanti abalandeli bakasathane abakholelwa ebukhoneni besiqu sika-devil kodwa eyabo inkolo imayelana nenkululeko nezifiso zabo, lokhu kudidiyelwe ndawonye.
Embuzweni othi ingabe inombolo u-666 iluphawu lukasathane na, uphendule wathi leyo yinombolo yokwenziwa esithe, nakuba iphathelene nobusathane kodwa ayikhona konke ubusathane obuyikho.
Uthe lena yinombolo yesilo okusho uhlangothi olubi lomuntu. Uyichithile futhi eyombuzo othi kungabe ubusathane lobu abusho yini ukuhlangana emathuneni ebusuku kushumpulwe amakati.
Uthe bona njengabakhonzi bakasathane bamelene nemihlatshelo yezilwane ngoba bayakholelwa ekuvikelweni kwamalungelo ezilwane kunjalo nje kubo bonke abakhonzi abaningi bakasathane abaziyo, akukho noyedwa okwenzayo lokho.
Ephawula ngokwambuleleka kwakhe ngobusathane, uthe umuntu akashunyayezwa ukuba abemukele (ubusathane) kodwa uzalwa nakho.
Uphinde wachaza kafushane ngomsuka wakhe, wathi uzalelwe emndenini wohlanga lwamaBhunu angama-Krestu.
Ngokusho kwakhe, ushiyile ubu-Krestu eminyakeni ewu-17 edlule, waba wumaluleki wokomoya, akubize nge-psychic ngolwasemzini.
Eminyakeni elandele lapho ube esenza ucwaningo ngezinkolo ezahlukene nokuthe lapho efunda ibhayibheli lobusathane eminya-eni ewu-5 edlule kwaba khona ezithola kulo ukuthi ungubani.
Ubusathane lobu ubuchaza athi:
• buwubuhlakani obungangcofekile ngobuwena.
• buyimpilo ekhululekile ngokuphelele, ongalahlwa nembeza ngayo njengezinye izinkolo.
• akukho phutha ngemizwa ye-mvelo.
• buyithuba lokuzazi ngobuwena nokupheleliswa kwakho.
Maqondana nobudlelwano nomndeni wakubo, uthi abazali bakhe bangamaKrestu kodwa bayamamukela eyilokho ayikho. Kanti nakubantu emphakathini uthi akazenyezi nxa ebuzwa ukuthi uyiliphi ngokwenkolo futhi uthi akukho muntu okumele abe nokwesaba ngoba akukho mthetho owephuliwe ngabakwenzayo.
Leli phuzu uliphetha ngokuthi kuyehluka okwenziwa ngabantu nxa bezwa indaba yakhe: abanye bayacunuka bajokole kanti abanye bayamlalela ngomdlandla.
UMBHISHOBHI Vusi Dube ongumholi we-Ethekwini Community Church (ECC), uthe ukuvulwa kwaleli bandla eNingizimu Afrika kuyikhwelo kwabenkolo yobuKrestu ukuba baphaphame, ikakhulukazi kulesi sikhathi sempi yeCoronavirus lapho kukhonzwa phansi kwemibandela.
Wengeza ngokuthi ukuphumela obala kwale nhlangano yebandla likasathane kuyinselelo ebhekiswe kwabenkolo yobuKrestu ukuze kubonakale ukuthi baqine kangakanani okholweni lwabo.
UMnu Michael Swain ongumqondisi wenhlangano iFreedom Of Religion for South Africa (FOR SA) ezinze eCape Town ebuzwa yiLANGA LangeSonto ngalolu daba, uphendule wathi njengenhlangano eshabashekele amalungelo omthetho kwezenkolo, ukuphumela obala kwale nhlangano kuvumelekile ngokomthethosisekelo waleli zwe.
Ucacisile ukuthi umthetho uthi abantu bakhululekile ukukholelwa kunoma yini, inqobo nje nxa lokho kungezonyathela amalungelo abanye.
Previous articleUZandi Khumalo usengene kumasikandi
Next articleSikhulu isililo ngomculi we-gqom